2 Maalmood oo lamadegaan safar ah laga bilaabo Marrakech ilaa Zagora oo leh cunno Xalaal ah -
Maalinta 1: Marrakesh ilaa Zagora
Amba bixida 7.30:2 subaxnimo ilaa Zagora oo kutaala koonfurta MOROCCO ee gobolka Souss-Massa-Daraa. Waxaan ka gudbi doonnaa buuraha dhaadheer ee atlas quruxsan anaga oo mari doonna tizi n 'tichka oo sii maraya tuulada aitbenhaddou halkaas oo aan ku joogsan doonno ilaa XNUMX saacadood si aan uga ogaanno kasbaskeeda dhufayska leh oo ka mid ah goobta UNESCO ee Hidaha Dunida. Iyada oo leh kabas aitbenhhaddou oo waxyeello u leh waa meel wanaagsan oo lagu duubo filimada, soosaarayaal badan oo filimmo badan leh ayaa doorta aitbenhaddou (Mummy, Prince of Persia, Gladiator, Lawrence of Arabia…). Qadada ka dib mid ka mid ah makhaayadaha maxalliga ah ee ku yaal Ouarzazate (Hollywood ee Morocco) waxaan sii wadi doonnaa jidka aan u aadnayno Zagora oo aan uga sii gudbayo Buuraha Anti-Atlas oo sii maraya tuulada Berber ee Agdez iyada oo ay la socdaan kumanaan geedo timireed ah oo dhan illaa Dooxada Draa dooxada timirta ee ugu weyn Morocco.
Markaad gaartid Zagora galabtii dambe waxaad bilaabi doontaa socodka geel lamadegaanka oo ku dhex yaal ciidaha intaad goobjoog u tahay qorrax dhaca oo aad xerada gaarto. Cashada kadib waxaad fursad uheli doontaa inaad aragto cirka xiddigta ugu cajiibka badan ee ka hooseeya madadaalada durbaanada. Casho Xalaal ah iyo habeen teendhooyin ah
Maalinta 2: Zagora Dunes High Atlas - Marrakesh
Waxaan kugu toosineynaa subaxa hore si aan u aragno nalalka ugu horeeya ee sixirka qorraxda iyo qorrax ka soo baxa .ka dib quraacda dhaqanka ee bivouac, waxaan dib ugu raaceynaa geela Zagora si aan ula kulano darawalkaaga, ka dibna dib ugu laabo marrakech. Waqtiga firaaqada Ouarzazate ee qadada makhaayada maxalliga ah, ka dibna sii wad ilaa Marrakesh adoo u maraya buuraha atlas. Dhammaadka adeeggayaga.
Maalinta 1: Marrakesh ilaa Zagora Amba bixida 7.30:2 subaxnimo ilaa Zagora oo kutaala koonfurta MOROCCO ee gobolka Souss-Massa-Daraa. Waxaan ka gudbi doonnaa buuraha dhaadheer ee atlas quruxsan anaga oo mari doonna tizi n 'tichka oo sii maraya tuulada aitbenhaddou halkaas oo aan ku joogsan doonno ilaa XNUMX saacadood si aan uga ogaanno kasbaskeeda dhufayska leh oo ka mid ah goobta UNESCO ee Hidaha Dunida. Iyada oo leh kabas aitbenhhaddou oo waxyeello u leh waa meel wanaagsan oo lagu duubo filimada, soosaarayaal badan oo filimmo badan leh ayaa doorta aitbenhaddou (Mummy, Prince of Persia, Gladiator, Lawrence of Arabia…). Qadada ka dib mid ka mid ah makhaayadaha maxalliga ah ee ku yaal Ouarzazate (Hollywood ee Morocco) waxaan sii wadi doonnaa jidka aan u aadnayno Zagora oo aan uga sii gudbayo Buuraha Anti-Atlas oo sii maraya tuulada Berber ee Agdez iyada oo ay la socdaan kumanaan geedo timireed ah oo dhan illaa Dooxada Draa dooxada timirta ee ugu weyn Morocco.
Maalinta 2: Zagora Dunes High Atlas - Marrakesh Waxaan kugu toosineynaa subaxa hore si aan u aragno nalalka ugu horeeya ee sixirka qorraxda iyo qorrax ka soo baxa .ka dib quraacda dhaqanka ee bivouac, waxaan dib ugu raaceynaa geela Zagora si aan ula kulano darawalkaaga, ka dibna dib ugu laabo marrakech. Waqtiga firaaqada Ouarzazate ee qadada makhaayada maxalliga ah, ka dibna sii wad ilaa Marrakesh adoo u maraya buuraha atlas. Dhammaadka adeeggayaga.
Hagaha Socdaalka Marrakech Xalaal
Safarka Xalaal ee Morocco
Marooko waa meel wanaagsan oo lagu arko dhaqamo kala duwan oo ay ka mid yihiin kuwa leh Afrika, Carabi, Berber, Moorish iyo saamaynta reer galbeedka